China Bags fekitori uye vagadziri | SJJ
Wholesale Tsika inotakurika yekutenga bhegi, asiri-rakarukwa mabhegi, kanivhasi bhegi, mabhegi, eco-hushamwari, unyoro & yakasimba. Chinhu chakanakisa chekusimudzira pamutengo wemakwikwi wekushambadzira & bhizinesi.
Mazuva ano tinokurudzira hupenyu hune hushamwari, isu tinofanirwa kuyedza kushoma sezvinobvira shandisa mabhegi anoraswa kana iwe uchiita zvekutenga, saka mabhegi anoshandiswazve ndiwo akanaka kutsiva mabhegi anoraswa. Pretty Shiny Gifts Inc. inopa akawanda matsva marudzi ezvakatipoteredza ekuchengetedza zvinhu mabhegi, mbishi zvigadzirwa kutenga uye kugadzira nyore. Nguva dzinoverengeka dzinoshandisa kuchengetedza zviwanikwa.
Mabhegi anoshandiswazve anogona kushandiswa kazhinji muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, aya mabhegi anova nzira inobatsira kushambadza nekusimudzira, zvakare inzira yehupfumi yekushambadzira kana kusimudzira yako brand, sangano. Iwe unogona kugadzirisa chero logo kana meseji pairi. Masaga zvakare anogona kutengesa sezvipo. Tinogamuchira mafashoni ako ekugadzira.
Handeyi nazvo! Taura nesu tora mabhegi ako akagadzirwa.
LAva Available zvinhu mabhegi:
Masaga Nonwoven (60g / 75g / 90g / 100g / 120g / 150g zviripo)
Canvas mabhegi (6oz / 8oz / 10oz aripo)
Cotton mambure mabhegi
Oxford machira mabhegi (210D / 420D aripo)
Logo maitiro: Silkscreen anodhinda / offset kudhinda / kupisa kuchinjisa / embroidery logo
lAttachment: Zipper / donje tambo / simbi / epurasitiki bhakoro
Zvakanakira Nonwoven zvikwama:
• Inowachika, inogara yakasimba uye inofema, zvakare inorwisa-sema, yakapfava uye yakapfava.
• Chishandiso chinopenya chekumaka sezvo ichikwanisa kudhinda logo yayo.
• Mabhegi akachengeteka uye asina chepfu anochengetedza zvakatipoteredza.
• Chengetedza nharaunda: kushandiswa kwayo kunoderedza kusvibiswa kwevhu kunokonzerwa nemapurasitiki. Izvo zvinodzokororwa uye zvinoshandiswazve. Kureruka kwekuora semabhegi asina kurukwa anoora mukati memwedzi mitanhatu, kusiyana nemapurasitiki epurasitiki anotora makore kuora zvizere.
• Inokodzera vanhu veese mazera.
Zvakanakira kanivhasi zvikwama:
• Iyo yakasvibirira bhegi revasheni inogadzirwa neyechisikigo zvinhu, zvinoenderana nharaunda uye zvinogadzirwa nemhepo.
• Yakasimba uye yakasimba, zvakare nyore kuchenesa.
Zvakanakira Cotton net mabhegi:
• Fashoni maitiro
• Yakakura yakatambanuka uye yakakura chinzvimbo
• Lightweight uye nyore kurongedza
Makomborero oxford jira mabhegi
• Nyore kugeza uye nekukurumidza-kuoma
Pashure: Yakapfava PVC USB
Zvadaro: UV Kudhinda Metal Charms Keychains
Asina kurukwa mabhegi ekutenga
Mabhegi ekutenga asina kurukwa